Madaxtooyadda oo looga arrinsanayo Mustaqabka Abuumansuur, iyo Sirdoonada Xalane oo ku sii qul qulaya halka lagu hayo Wadaadka. – Hornafrik Media Network
Madaxtooyadda oo looga arrinsanayo Mustaqabka Abuumansuur, iyo Sirdoonada Xalane oo ku sii qul qulaya halka lagu hayo Wadaadka.
By HornAfrik	 On Aug 14, 2017
Madaxwayne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, Ra’iisal wasaare Xasan Cali Kheyre iyo Madaxwaynaha Dowlad Goboleedka Koofurgalbeed, Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa wadahadalo albaabada u xiran yihiin ku leh Madaxtooyada, iyagoo ka wadahadalaya waxa laga yeelayo Sheekh Muqtaar Roobow Abu Mansuur oo shalay isu soo dhiibay Dowlada.
Qodobadda looga hadlayo Kulanka ayaa waxaa ka mida sidii Warbaahinta uu u hor imaan lahaa Rooboow, una cadayn lahaa Mowqfiiska ku aadan Kooxda Alshabaab, iyo Dawladda Somalia oo uu hadda isku soo dhiibay.
Sh Muqtaar Rooboow oo ay Daal iyo Diif badan ka muuqato, isla markaana xanuunsanaya ayaa la aaminsan yahay inaysan hadda suuragal noqon karin in Warbaahinta uu hor yimaado, Waxaana laga yaabaa inay Toddobaad iyo ka badan qaadato soo bandhigidda Rooboow.
Sheikh Muqtaar Roobow oo ah Hogaamiyihii ugu sareeyay ee ka soo goosta Alshabaab oo isku soo dhiiba Dawladda Somalia ayaa u muuqda in Dawladdu ay hadda xakamaynayso Xogta laga heli karo Xaaladiisa, Waxaana laga qaaday Xalayba Taleefoonkiisa Gacanta ee lagu yaqaanay, iyadoo la siiyay Nambar cusub.
Maraykanka ayaa dhawaan Rooboow ka saaray Liiska Argagixisadda Caalamka, iyagoona meesha ka saaray Lacagtii Madaxiisa dul saarnayd. taasoo soo dadajisay in Alshabaab ay weeraro is dada joog ah ku qaadaan Wadaadka oo tan iyo 2013-kA dibad joog ka ahaa Go’aanadda Kooxda, iskana joogay halkii uu ku dhashay ee Deegaanka Abal oo ka tirsan Bakool.
Rooboow oo ay Muqdisho ugu dambaysay 2006-dii waxa uu Xalay ka soo dagay Garoonka Muqdisho qaybta Afisiyooni, isagoo ay wehliyaan Wasiiro iyo Saraakiil, Waxaana kadib la geeyay Xarunta Nabadsugidda ee Habar Khadiijo, halkaas oo ay ku illaalinayaan Ciidamadda Gaashaan ee NISA. isagoona la dajiyay Qolkii la dajiyay Xasan Dahir Aways markii uu Dowladda Somalia u soo gacan galay.
Sirdoonadda Caalamiga ah ee Fadhigoodu yahay Xalane ayaa ku sii qul qulaya Maanta Xarunta NISA si ay ula kulmaan Sheekh Muqtaar Roobow oo ay dhici karto inuusan xog badan ka hayn sida hadda ay u shaqayso Kooxdu, maadaama uu waqti dheer ka maqan yahay Kooxdiisii hore. isagoona ay ugu wardambaysay xilligii uu Madaxda ka ahaa Axmad Godane.
Dawladda Somalia waxaa horay isugu soo dhiibay Xasan Daahir Aways oo uusan cadayn Mawqifkiisa oo illaa hadda ku jira Xabsi Guri, Zakariye Ismaaciil oo cadeeyay Mawqifkiisa, haddana ah Taliyaha Qaybta Sirdoonka NISA, Maxamad Siciid Atam oo isna cadeeyay Mawqifkiisa, haddana dagan Qadar, Waxaanse la ogayn in Abuumansuur Xil loo dhiibo doono iyo in Qadar ay Magangalyo siin doonto.
Hadda: Muqtaar Rooboow oo laga soo dajiyay Magaaladda Muqdisho.